MUQDISHO, Soomaaliya - Shan Xisbi siyaasadeed, oo fadhigoodu yahay Muqdisho, ayaa maanta soo saarey war-saxaafadeed wadajir ah, oo ay kusoo dhaweeyeen natiijadda Shirkii madaxda dowlad goboleedyada ee shalay lagu soo afjaray Kismaayo.
Xisbiyada oo ay hogaaminayaan qaarkood mas'uuliyiin sare oo isagu jira kuwa hore xilal uga soo qabtey dowladihii hore iyo kuwa hadda kamid ah dowladda Federaal ah ayaa sheegay inay taageersan yihiin war-murtiyeedkii Shirka Kismaayo.
Waxay daboolka ka qaadeen inay la qabaan madaxda dowlad goboleedyada walaaca ay ka qabaan horumar la'aanta dhinacyada amniga, Siyaasadda iyo garsoorka, oo ah arrimo waaweyn oo ay ku fashilintay dowladda haatan jirta.
Xisbiyada waxay sidoo kale soo dhaweeyeen shirka aaya ka talinta ee lagu qaban doono magaalada Garoowe, ee caasimadda Puntland bishii October ee 2018, waxaana ay ku baaqeen madaxda dowladda Federaalka inay saxdo tabashada maamullada.
HOOS KA AKHRI BAYAANKA XISBIYADDA:
Geedi: Dowladda xoog bey ku timid, xoog baana lagu difaacayaa [DAAWO]
Soomaliya 18.12.2018. 23:46
Waxa uu sheegay in dowlad aysan shacabka la xaajooneynin, balse ay awood adeegsanayso...